Sevha nzvimbo pane yako diski uye shandisa yako Steam mitambo mune mbiri bhuti | Linux Vakapindwa muropa
Steam pasina mubvunzo yave chishandiso chinofanirwa kuve cheese gamer pakombuta yako uye hazvisi pasina kuti chishandiso ichi chazove chakakurumbira, nekuti kukura kwayo kukuru kuri nekuda kwekuti zvemukati zvemadhijitari zvayendesa kunzvimbo yehupfumiNaizvozvo, vanhu vazhinji vanosarudza kuve nemazita avo anowanikwa paInternet pane chimiro chemuviri chakasakara uye chisingashandisike nekufamba kwenguva.
Chimwe chehunhu hukuru ndechekuti Steam inoyambuka-chikuva saka munharaunda yeLinuxera iri yakanaka pamwe nekuti nekufamba kwenguva mazita emitambo yemuno yeLinux ari kuwedzera mukabhuku. Izvi zvinotonhorera zvakanyanya, sezvo isu tisisamanikidzwe kuvimba papuratifomu imwe chete senge makore apfuura kuti tinakirwe nemazita edu eatinoda
Kutaura kwekupedzisira, chimwe chinhu chandinoda zvakanyanya nezve Steam ndiyo mitengo inodhura ichienzaniswa neyakagadzirwa fomati uye tisingataure zvinopihwa uye zvipo izvo zvinogara zvichipa.
Iye zvino ndega pane dambudziko diki maererano nemazita ezvinzvimbo kubva makore mashoma apfuura zvinoreva, sezvo mazhinji acho taigona kungomhanya kubva paWindows.
En nyaya idzi taifanira kutendeukira kuWine, Tamba paLinux, Crossover kana pakupedzisira kuti uve nebhutsu mbiri.
Zvirinani mune yangu kesi kana ini ndikatora iyo mbiri bhuti ne Windows 10 kune rimwe basa uye zvechikoro zviitiko, saka ini ndine Steam yakaiswa pane yangu Windows 10 partition uye zvakare pane yangu Windows partition.
Ini pachangu, ndaive nedambudziko, nekuti Ini ndanga ndisingade kurodha pasi uye nemitambo yakafanana yakachengetwa muzvikamu zviviri zvakasiyana, uku kutambisa nzvimbo.
Saka ndakazvipa iro basa rekutsvaga mhinduro, Ndakatsvaga kuburikidza neStam maforamu ekubatsira Uye yaigara iri mhinduro imwechete, iyo yandakanga ndisingade.
Saka kuongorora Valve wiki ndakawana mhinduro yakapusa iyo pachezvayo yakanga isina kuyambuka pfungwa dzangu.
Chatinofanira kuita iva nechikamu cheimwe yako sisitimu yekushandisa yakakwira, mune yangu iri Windows 10 saka isu tinofanirwa kutanga tave nechokwadi chekudzima Windows nekukurumidza kutanga Zvakanaka, kana zvisiri, chikamu chacho chiri mumamiriro ehubernation saka hachizotibvumidze kuwana iyo data, isu taigona kungoisimudza mumodi yekuverenga.
Kune izvi tinoenda kumagetsi masetingi uye muchikamu chinotevera tinozviita, izvi zvinoshandawo paWindows 7 uye Windows 8.
Kana iwe usingakwanise kuwana chikamu ichi, unogona zvakare kudzima icho nekuvhura cmd neropafadzo uye typing:
Nguva dzese dzatinowana Windows yedu yekumisikidza, kana iwe usina kutanga patsva kwakaremara, uchafanirwa kuita uyu murairo kana uchizoshandisa Steam pane yako Linux chikamu.
Waita izvi izvozvi kana tikapfuurira kukwirisa chikamu chedu.
Iye zvino Isu tinongofanirwa kuona panowanikwa Steam zvese mune imwe sisitimu yekushandisa, pamwe neyedu muLinux partition.
Pano dambudziko nderekuti urikushandisa kugona kunakidzwa nemazita ako muLinux, ayo andakambotaura nezvayo nzira dziri muchirongwa kazhinji dzinotevera.
Iye zvino mune yangu nyaya yegomo pane yangu Windows partition inotevera:
Sezvo taona nzira idzi, tichaenda kuzvimisikidza mune yedu Steam folda yatakaisa paLinux uye tichaenda kuzotumidza zita redu kuti «steamapps» forodha.
Ndakazviita nenzira inotevera:
Uye pakupedzisira isu tinongogadzira yekufananidza chinongedzo icho chiri kwandiri Windows 10, seinotevera:
Kwavanofanira kutsiva nzira yavo:
Uye takagadzirira nayo tinogona kukoshesa chinongedzo chekufananidzira chatogadzirwa. Iye zvino isu tinongofanirwa kumhanyisa Steam uye tiongorore kuti iyo mitambo iyo yatainge tatoisa inogona kumhanyisa pasina kuidzosera pane yedu Linux partition.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Sevha nzvimbo pane yako diski uye shandisa yako Steam mitambo mune mbiri bhutsu
Luis Ferrer akadaro
Hazvisi nyore here kana iwe ukaisa Steam iwe unogadzira raibhurari yemutambo pane yakasarudzika partition? Zvakare, kana iwe ukafunga kuomesa komputa, semuenzaniso, haubvise iyo mitambo, iyo isiri chaiyo yakajeka.
Pindura Luis Ferrer